प्राय: सोधिने प्रश्नहरू: प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्कको बारेमा
किन कुकुरहरुलाई K9 Mask Need चाहिन्छ?
घरपालुवा जनावरले मानिस जस्तो हावा सास फेर्छ, त्यसैले उनीहरूलाई संकटमा उहि सुरक्षा चाहिन्छ। धुँवा, खरानी, ​​धुलो, विष, रसायन, परागकण, मोल्ड, र एलर्जर्न्स कुकुरको स्वास्थ्यको लागि सबै सम्भावित खतरा हुन्।
मौसम परिवर्तनले नाटकीय जलवायु घटनाहरूको परिणामस्वरूप वन्य आगोको धुवाँ, धुलो आँधी, ज्वालामुखी क्रियाकलापको खरानी, ​​तुफानबाट मोल्ड, रातो ज्वारको विष, र अन्य परिस्थितिहरू समावेश गर्दछ जसले नराम्रो असर गर्छ जसलाई हामी सास फेर्छौं।
राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्क खराब हावा गुणस्तरको लागि नयाँ पाल्तु जनाव स्वास्थ्य समाधान हो। हामीले कुकुरहरूको लागि विशेष रूपमा डिजाइन गरिएको 'वर्ल्ड्स फर्स्ट' एयर फिल्टर मास्क सिर्जना गरेका छौं।
K9 Mask® सुविधाहरू र लाभहरू के हुन्
K9 मास्का संयुक्त राज्य अमेरिकामा बनेको छ र कुकुरहरूको लागि सबैभन्दा प्रभावशाली एयर फिल्टर मास्क हो। यो वायु प्रदूषण स in्कटमा तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूको लागि एक प्रीमियम समाधान हो।
K9 Mask® सुविधाहरू र लाभहरू
N95 "चरम ब्रीथ" गैर-तेल आधारित कण वायु पदार्थको% ters% सम्म फिल्टर गर्दछ। को रेटिंग स्तर एफडीए, सीडीसी (रोग नियन्त्रण र रोकथामका लागि केन्द्रहरू) र NIOSH (व्यावसायिक सुरक्षा र स्वास्थ्य को लागी राष्ट्रीय संस्थान)।
PM 2.5 फिल्टरिंग "चरम ब्रीथ" ले हावाको सब भन्दा सानो विषाक्त कणहरू (मानव कपालको चौडाई भन्दा सानो - २. mic माइक्रोन) लाई कुकुरको फोक्सो र रगत प्रवाहमा जानबाट छनोट गर्दछ जसले छोटो र दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या निम्त्याउन सक्छ।
हानिकारक वायु अणुहरूसहित सक्रिय कार्बन फिल्टर तह बॉन्ड्सले कुकुरको रक्त प्रवाहमा प्रवेश गर्नबाट विषलाई घटाउँछ।
प्यान्टि Ex एक्जेल वाल्भले कुकुरलाई चिसो पार्न मद्दत पुर्‍याउनबाट तातो रिलीज गर्दछ।
वायु प्रदूषण बाहिर राख्न प्रभावकारी मास्क समायोजनहरू
हामी मास्कमा प्रदूषित हावा चुहावट सुनिश्चित गर्न घाँटी र थूली समायोजन पट्टा सहित कुकुरहरूका लागि मात्र एयर फिल्टर छौं। K9 Mask® थूथन समायोजन कुकुरको कुकुरमुनि प्रयोग गरेर पाल्तु जनावर मालिकले मास्कमा टेन्सन समायोजन गर्न सक्षम हुन्छ प्रदूषित हवालाई मास्कमा चुहिनबाट महत्त्वपूर्ण घटाउन। यो मात्र हावा फिल्टर बाट मात्र पारित हावा कुकुर द्वारा साँस गरिएको छ सुनिश्चित गर्दछ।
ताजा प्रभावकारी फिल्टरिंगको लागि एयर फिल्टर्स बदल्नुहोस्
हामीले कुकुरहरूका लागि एउटा एयर फिल्टर मास्क सिर्जना गर्‍यौं दुई भिन्न बदलिन योग्य एयर फिल्टर विकल्पहरूको साथ। हावा क्वालिटीको स crisis्कटमा निर्भर गर्दै तपाईले "क्लीन्ट ब्रीथ" वा "चरम ब्रीथ" एयर फिल्टर तपाईंको K9 मास्कमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यी दुई एयर फिल्टरहरूमा फरकको बारेमा FAQ मा थप पढ्नुहोस्।
कम प्रकाश अवस्थाहरूमा दृश्यता सुरक्षा
मास्कको छेउमा परावर्तक प्यानलहरू कालो वा हल्का हल्का वातावरणमा तपाईंको घरपालुवा जनावरलाई संकटमा बचाउनका लागि।
K9 Mask® मास्क ताजा राख्दै बाहिरी प्रयोगबाट स्लोबर र फोहोर हटाउन सकिन्छ।
K9 मास्क कहाँ बनेको छ?
राम्रो एयर टीम अफिसहरू द्वारा K9 मास्क अस्टिन, टेक्सास हो र हाम्रो सबै विनिर्माण डलास, टेक्सासमा गरिन्छ।
प्रत्येक K9 Mask® तपाईंलाई आफ्नो घरपालुवा जनावरलाई वायु प्रदूषणबाट बचाउन मद्दतको लागि प्रतिबद्ध कारीगरहरूद्वारा बनाइएको हो। अनुसन्धान र उत्पादन परीक्षण हामी आफैंको र कुकुरहरू द्वारा गरिन्छ। हामी तपाईंको घरपालुवा जनावरहरूलाई हेरचाह गर्न प्रतिबद्ध छौं जस्तो कि यो हाम्रो आफ्नै हो।
K9 Mask® को सुरू गर्नुभयो?
गुड एयर टीमका सह-मालिक र सीईओ किर्बी होम्स गर्मीको समयमा आफ्ना हजुरबा हजुरआमालाई भेट्न टेक्सासबाट दक्षिणी क्यालिफोर्नियाको ओजाई शहरको यात्रामा हुर्केका थिए।
पश्चिम तटीयमा जंगली आगोको तीब्रताका साथ कर्बीले क्यालिफोर्नियाका मानिसहरूले वायु आगोको धुवाँबाट आफूलाई जोगाउन एयर फिल्टर फेस मास्कहरू प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकताका बारे सोच्न थाले।
उसलाई यो पनि भयो कि कुकुरहरूले ज wild्गलको आगोको मौसममा छोटो हिंड्ने क्रममा बाहिर जान र पिप खेल्न आवश्यक छ, तर कुकुरहरू कसरी विषालु धुँवामा सास फेर्नबाट जोगिनेछन्? यस प्रश्नको उत्तरको खोजीमा उनले पत्ता लगाए कि कुकुरहरूका लागि कुनै हावा फिल्टर मास्क थिएनन्।
उत्तरी क्यालिफोर्निया वाइल्डफायरबाट धुवाँ सिर्जना गर्दै एश, काख, र २०२० मा विषाक्त एयर।
किर्बीले उनका भान्जा भाई इभन डगर्टीलाई घरपालुवा जनावरहरूको लागि न्यून हावाको गुणस्तरको समस्या समाधान गर्न राम्रो एयर टोलीमा सामेल हुन आमन्त्रित गरे। सँगसँगै तिनीहरूले प्रोटोटाइपहरू विकास गर्न र उत्पादन परीक्षण गर्न महिनौं खर्च गरे। २०१ of को सुरूमा उनीहरू कुकुरहरूको लागि संसारको पहिलो एयर फिल्टर मास्कको लागि डिजाइन प्रतिस्पर्धा गरे।
तिनीहरूले पूर्ण रूपमा रकम दिएaKickstarter अभियान मार्च २०१ in मा K2019 मास्कको उत्पादन सुरु गर्न।
तिनीहरूको लक्ष्य कुकुर मालिकहरूलाई नवीन एयर फिल्टर समाधानहरूको साथ तिनीहरूको घरपालुवा जनावरहरूको छोटो र दीर्घकालीन स्वास्थ्यको रक्षा गर्न सशक्त बनाउनु हो। K9 मास्काले कुकुरहरूलाई ज wild्गल आगोको धुवाँ, धुलो आँधी, ज्वालामुखी खरानी, ​​अश्रु ग्यास, रासायनिक स्पिलहरू, रातो टाइड ब्रेभोटोक्सिन, परागकण गर्ने वनस्पति, एलर्जी, ब्याक्टेरिया, मोल्ड, र फus्गसहरूमा सुरक्षा दिन्छ।
मँ K9 मास्कको बारेमा समाचार लेखहरू कहाँ पढ्न सक्छु?
भर्खरको समाचार सम्बन्धी सबै लेखहरू, भिडियोहरू, र राम्रो एयर टीम द्वारा K9 मास्कको बारेमा रिपोर्टहरू यहाँ पढ्नुहोस्: K9Mask.com/Pages/News
कुकुरहरू र वायु गुणस्तरको बारेमा ब्लग लेखहरू कसरी पढ्ने?
हामी पालतू स्वास्थ्यमा वायु प्रदूषणको प्रभावको बारेमा हामीले क्युरेट गरेका र लेखेका विभिन्न ब्लग पोष्टहरू यहाँ पढ्न सक्छौं: K9Mask.com/Bloggs/News
के तपाइँसँग K9 मास्कको लागि सोशल मिडिया छ?
K9 Mask® सोशल मीडिया अनुसरण गर्नुहोस्
ट्विटर: @ K9Mask
इन्स्टाग्राम: @ K9_Mask
फेसबुक: @ डगपोल्युसनमास्क
व्यक्तिहरूसँग साझेदारी गर्नुहोस् जुन तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कुकुरहरूलाई हावा प्रदूषणबाट जोगाउनु पर्ने आवश्यकताको बारेमा जानकारी गराउनु पर्छ। तपाईं कुकुरहरूको स्वास्थ्यको वकालत गर्न सक्नुहुन्छ K9 मास्काको बारेमा राम्रो खबर साझा गरेर।
PDF Information Flyer Download: K9 मास्क जानकारी उडान
के K9 मास्की शार्क ट्याank्कमा थियो?
हो, K9 मास्की एपिसोड season मा सीजन १२ को बेला २०२० मा एबीसीमा शार्क ट्याank्कमा थिए। शार्कको साथ ट्या the्कीमा के भयो भनेर यहाँ थप पढ्नुहोस्। K9Mask.com/Pages/SharkTank
कुकुरलाई K9 मास्क अर्डर गर्ने बारेमा प्रश्नहरू
म कसरी मेरो कुकुरको लागि सही आकार K9 मास्क फेला पार्न सक्छु?
हाम्रो K9 मास्क साइजिंग चार्टले तपाईंलाई तपाईंको कुकुरको लागि सही आकार फेला पार्न मद्दत गर्दछ: K9Mask.com/Pages/Size-Chart
के K9 मास्क फिट "छोटो नाकिएको" फ्लैट सामना गरेको कुकुर जातको?
हामीसँग हाल फ्ल्याट फेसिड (ब्रेचिसेफेलिक) कुकुरहरू (पग, पेकिन्जेज, बुलडग, इत्यादि) को लागि K9 मास्क आकारहरू छैन। यद्यपि हामी यी अनुसन्धान र विकासलाई जारी राख्छौं यी कुकुर जातहरूका लागि समाधानहरू फेला पार्न।
"सफा" र "चरम" ब्रीथ एयर फिल्टर बीचको भिन्नता के हो?
'सफा BREATHE' र 'अत्यधिक बृद्धि' - हामीले दुई एयर फिल्टर विकल्पहरूको साथ एउटा K9 Mask® सिर्जना गरेका छौं। दुबै एयर फिल्टर प्रकारहरू समान K9 मास्कमा फिट छन्। प्रत्येक K9 Mask (()) एयर फिल्टरहरू सहित आउँदछ। अतिरिक्त ()) प्याक एयर फिल्टर रिफिलहरू वातावरणीय वायु गुणस्तर कारकहरू परिवर्तन गर्नका लागि उपलब्ध छन्।
प्रत्येक एयर फिल्टर अधिकतम प्रभावकारिता र सुरक्षाको लागि नयाँ ताजा फिल्टरमा परिवर्तन हुनु अघि कुल प्रयोगको चार (4) घण्टा सम्म मूल्या rated्कन गरिएको छ।
के बनाउँछ 'सफा सास' एयर फिल्टर अनौंठो?
के बनाउँछ 'चरम सास' एयर फिल्टर अनौंठो?
PM2.5 हानिकारक विषाक्त कणहरू २. as भन्दा सानो रूपमा फिल्टर गर्दछ
चौराइमा माइक्रोनहरू जस्तै धुवाँ, खरानी, ​​धुलो, रसायन, एलर्जीन, परागकण, काज, धुम्रपान, र ब्याक्टेरिया।
कसरी तपाईंको कुकुरको साथ K9 मास्क प्रयोग गर्ने
म K9 मास्कमा कसरी एयर फिल्टर फिल्टर भर्छु? (भिडियो)
K9 Mask® मास्क र एयर फिल्टर को प्रत्येक उपयोग को प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न एयर फिल्टर रिफिल को उपयोग गर्दछ। प्रत्येक एयर फिल्टर को उपयोग को4घण्टा को कुल को लागी मूल्या्कन गरीएको छ।
K9® मास्कमा हवा फिल्टर घुसाउन:
मास्कको माथि जिपर खोल्नुहोस्।
माथिको हवाको फिल्टर मास्कमा घुसाउनुहोस् माथिको "गाढा" साइड र तल "सेतो" छेउको साथ।
फिल्टरको कर्भ किनारा मास्कको नाकको अनुहार राख्नुहोस्।
घाँटी पट्टा तिर मास्क मा एयर फिल्टर को पछाडि कुनाहरु घुसाउनुहोस्।
मास्कको भित्र हावा फिल्टर प so्क्तिबद्ध गर्नुहोस् ताकि हावा फिल्टरको सबै किनाराहरू मास्कको छेउमा फिट छन्।
मास्कमा जिपर बन्द गर्नुहोस्।
K9 Mask® एयर फिल्टर सम्मिलित भिडियो यहाँ हेर्नुहोस्: K9Mask.com/pages/how-to-insert-air-filter-into-k9-mask
म K9 मास्क लगाउन मेरो कुकुरलाई कसरी प्रशिक्षण दिन्छु? (भिडियो)
K9 मास्क लगाउनको लागि तपाईंको कुकुरलाई प्रशिक्षण दिन मास्क लगाउनको साथ एक सकारात्मक प्रोत्साहन जोडी समावेश छ।
तपाईको कुकुरसँग धैर्य राख्नुहोस्। यस प्रक्रियालाई १- weeks हप्ता लाग्न सक्छ।
तपाईंको कुकुरलाई मास्क लगाउन कसरी प्रशिक्षण दिनको लागि हाम्रो K9 मास्क भिडियो हेर्नुहोस्: K9Mask.com/pages/how-to-get-your-dog-to-wear-an-air-filter-face-mask
अधिकतम लाभका लागि म कसरी कुकुरको कुकुरको हिसाबमा K9 मास्कलाई प्रभावी रूपमा सुरक्षित गर्न सक्छु?
K9 मास्क® राम्रो तरीकाले लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ।
K9 Mask® थूथन समायोजन प्रयोग गरेर, मास्कको तल्लो तर्फ अवस्थित, तपाईं मास्कमा टेन्सन समायोजित गर्न सक्षम हुनुहुन्छ प्रदूषित हवालाई उल्लेखनीय पछाडि मास्कमा पछाडिबाट प्रदूषित हावा कम गर्न। यो मात्र हावा फिल्टर बाट पारित ताजा फिल्टर हावा कुकुर द्वारा साँस गरिरहेको छ सुनिश्चित गर्दछ।
मेरो कुकुरले K9 मास्क कहिलेसम्म लगाउन सक्छ?
चेतावनी: K9 मास्की केवल एक स .्कटमा अस्थायी प्रयोगको लागि डिजाइन गरिएको हो। हामी कुकुरलाई मद्दत गर्ने प्रयासमा कुकुरलाई हानी गर्न चाहँदैनौं।
लामो प्रयोगले कुकुरको स्वाभाविक क्षमतालाई असर पार्छ विशेष गरी ant० डिग्री सेल्सियस (एफ) / २ 80 डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा माथि तापक्रममा। यो मास्क एक छोटो अवधि को लागी र करीबी निगरानी अन्तर्गत प्रयोग गर्न को उद्देश्य हो।
एक पटकमा १० मिनेट भन्दा बढि "चरम ब्रीथ" एयर फिल्टरको साथ मास्क प्रयोग गरेर हामी सतर्क हुन सल्लाह दिन्छौं। यसका साथै "क्लीन्ट ब्रेथ" एयर फिल्टरहरू एक पटकमा minutes० मिनेट भन्दा बढि मास्क प्रयोग गरेर सावधान हुनुहोस्।
१० मिनेट (चरम ब्रीथ) वा minutes० मिनेट (क्लीथ ब्रीथ) पछि तपाईले आफ्नो कुकुरको सास फेर्न र पेन्टि check जाँच गर्न केही मिनेट को लागी मास्क हटाउन सक्नुहुन्छ, र त्यसपछि के10 मास्क लगाउन जारी राख्न सक्नुहुन्छ यदि जनावरले कुनै श of्का देखाएन भने। ।
K9 मास्क लगाएको बेला सधैं तपाईंको कुकुरलाई निगरानीमा राख्नुहोस्। यदि तपाईंले मेहनतको सास फेर्नुभयो वा अति तापको स notice्केत देख्नुभयो भने मास्क तुरुन्तै हटाउनुहोस्।
यो मास्कले तपाईंको कुकुरलाई चोटपटक वा मृत्यु निम्त्याउन सक्छ। कृपया यो एयर फिल्टर उत्पादन प्रयोग गर्नु अघि तपाईंको कुकुरको स्वास्थ्यको बारेमा तपाईंको पशुचिकित्सकसँग परामर्श गर्नुहोस्।
परिवर्तन गर्नुभन्दा पहिले K9 मास्क एयर फिल्टर कति लामो हुन्छ?
हामी प्रत्येक एयर फिल्टर चार ()) घण्टा सम्म प्रयोग गर्ने सल्लाह दिन्छौं।
जस्तै घरको वातानुकूलन एकाईको एयर फिल्टरलाई बदल्नु आवश्यक छ किनकि धुलो, लिन्ट, मलबे, र साना कणहरू फिल्टरमा फस्न सक्छ, K9 मास्की एयर फिल्टर बदल्नु पर्छ। ठूला कण वायु अवस्था, ओसिलो स्तर, वा फिल्टरमा अत्यधिक मैलामा निर्भर गर्दै यसलाई K9 मास्की एयर फिल्टर चाँडै बदल्न आवश्यक पर्दछ।
के K9 मास्कले मेरो कुकुरको लागि बज्ने काम गर्छ?
K9 मास्कीले थूलीको रूपमा काम गर्दछ। K9 मास्काको लागि यो दोस्रो उद्देश्य हो।
मास्कको प्राथमिक कार्य कुकुरलाई प्रदूषित हावाबाट जोगाउनु हो। जे होस्, K9 मास्काले कुकुरलाई टोक्ने बाट ठाउमा काम गर्दछ। ज wild्गल आगो, वा अन्य चरम मौसम घटनाहरूको चिन्ताको समयमा, कुकुरहरू चिन्तित हुन सक्छन्।
K9 Mask® लगाईएको कुकुरलाई एक थूलीको रूपमा कुकुरले र यी वातावरणमा भएका वरपरका मानिसहरुलाई सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
हो, बाह्य मास्क धोउन योग्य छ।
बदल्न सकिने एयर फिल्टरहरू, जुन तपाईं भित्र र बाहिर लिनुहुन्छ मास्क, धोउन मिल्दैन। कुकुरहरू सास फेर्दा वा पेन्टि when गर्दा शान्त हुन्छन् त्यसैले हामीले K9 मास्कलाई यसलाई लामो समयसम्म प्रयोगको लागि ताजा र सफा राख्नको लागि धोउन योग्यको रूपमा डिजाइन गर्‍यो।
K9 Mask® धुनु अघि एयर फिल्टर हटाउनुहोस्।
चिसो पानीमा हल्का डिटर्जेंटले धुनुहोस्।
कुकुरहरूका लागि एयर फिल्टर मास्कको बारेमा चिन्ताहरू
कुकुरहरू र कोविड -१ About को बारेमा के?
अमेरिकन वेटरनरी मेडिकल एसोसिएशनले टिप्पणी गरे कि घरपालुवा जनावरहरू COVID-१ easily मा सजिलैसँग संक्रमित भएको देखिँदैन, in in परीक्षण संयुक्त राज्यमा यस रोगको लागि सकारात्मक छ। यी स्ख्यामा अप्रिलमा न्यु योर्कको चिडियाखानामा चार बाघ र तीन सिंह, ,१ जना पाल्तु बिरालाहरू र तेईस जनावर कुकुरहरू समावेश छन्।
उत्तरी क्यारोलिना पग, टेक्सासको योर्की, र न्यु योर्कको जर्मन शेफर्ड जस्ता घरपालुवा जनावरहरूमा यी तितरबित COVID-19 केसहरूले थुप्रै कुकुर र बिराला मालिकहरूलाई रोकिरहेका छन्। CDC ले हालसालै यी मामिलाहरूको प्रकाशमा पाल्तु जनावर मालिकहरूको लागि यसको मार्गदर्शन अपडेट गर्यो - यद्यपि यसले घरपालुवा जनावरहरूको लागि नियमित परीक्षणको सिफारिस गरिरहेको छैन।
कुकुरहरू र कोरोनाभाइरसहरूको बारेमा हाम्रो पूर्ण लेख र FAQ यहाँ पढ्नुहोस्: K9Mask.com/Pages/Dogs-and-Coronavirus
के K9 मास्कामा कुकुर पन्त हुन सक्छ?
हामी जान्दछौं एक कुकुर आफै चिसो गर्न पन्टाउनु पर्छ। हामी K9 मास्कमा पेन्टि exha एक्स्लेभ वाल्भ प्रयोग गर्दछौं मास्कबाट तातो रिलीज गर्नका लागि।
तपाईको कुकुरको लागि उचित आकारको K9 मास्क प्राप्त गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। एउटा मास्क जुन तपाईंको कुकुरको लागि एकदम सानो छ कुकुरलाई विफल हुन अनुमति दिँदैन। यदि तपाईंको कुकुर आकारको बिचमा छ भने हामी तपाईंलाई ठूलो आकार प्राप्त गर्न सिफारिश गर्दछौं कुकुरले मास्क लगाएको बेला विडंबन गर्न सक्षम छ।
हामी मास्कमा लगाउने समय सीमित गर्नको लागि दिशानिर्देशहरू पनि प्रदान गर्दछौं ताकि कुकुरले अधिक गतिविधि वा उच्च तापक्रमको कारण तातो पाउँदैन। याद गर्नुहोस्, K9 मास्की एक आकस्मिकमा होइन, स situation्कटमा प्रयोग गर्न सकिन्छ।
कृपया तपाईंको कुकुरमा यो प्रयोग गर्नु अघि हाम्रा सबै चेतावनीहरू, उत्पाद विवरण, र प्याकेजि read पढ्नुहोस्। हामी घरपालुवा जनावरहरूलाई उनीहरूको घरपालुवा जनावरहरूको हेरचाह गर्न सशक्त बनाउन चाहन्छौं, तिनीहरूलाई कुनै नोक्सानी नपार्नुहोस्। हामी बुझ्छौं कुकुरलाई यसको मुख र नाकमा मास्क लगाएर हानि गर्ने जोखिम छ।
एक एयर फिल्टर मास्क एक कुकुर सूफोकट?
एउटा कुरोमा एउटा एयर फिल्टर मास्क राख्नु भनेको पशुको हड्तालमा चिन्ताको विषय हो। यो सम्भव छ कि श्वासप्रश्वासको समस्या वा बुढ्यौली भएका केही कुकुरहरूले एउटा हावा फिल्टरको साथ मास्कमा सास फेर्न संघर्ष गरिरहेका छन्, प्रायः स्वस्थ कुकुरहरूले छोटो अवधिको लागि मास्कमा सास फेर्न सक्षम हुनेछन्।
K9 मास्की एक संकटको स्थितिमा प्रयोगको लागि हो, साधारण रूपमा होईन। हामी 95 मिनेट भन्दा लामो लागि कुकुरमा चरम ब्रीथ एन 10 एयर फिल्टर मास्क नलगाउन सिफारिस गर्दछौं। यद्यपि हाम्रो स्वच्छ सास सक्रिय कार्बन एयर फिल्टर 30० मिनेट सम्म लगाउन सकिन्छ।
यो सामान्यतया कुकुरलाई बाथरूममा जान वायु गुणस्तरको संकटमा बाहिर जान पर्याप्त समय हुन्छ। हामी कुकुर मालिकहरूलाई निरन्तर दृश्यात्मक रूपमा तिनीहरूको पाल्तु जनावरहरूको निरीक्षण गर्न को लागी सल्लाह दिन्छौं जसमा श्रम गरिएको सास लिनका लागि हेर्नुहोस्। यदि कुकुरले श्रम गरीरहेको सास फेर्दै छ वा हेभिंगलाई तुरुन्तै मास्क हटाउनुहोस्।
के कुकुरहरूका लागि फेस मास्कले तिनीहरूको नाकमा हस्तक्षेप गर्दछ?
हो, हामी जान्दछौ एक कुकुरले आफ्नो नाक संसारमा नेभिगेट गर्न प्रयोग गर्दछ। K9 मास्की वायु प्रदूषण स in्कटमा प्रयोगको लागि हो, र आकस्मिक प्रयोगको लागि होईन। यो गम्भीर हावा क्वालिटी सम्बन्धी चिन्ताहरूका लागि सुरक्षा उपकरण हो जसले कुकुरको स्वास्थ्यलाई नकरात्मक रूपले असर गर्दछ।
के कुकुरहरू अनुहारको मास्क लगाउन चाहन्छन्?
हामीलाई थाहा छ कुकुरले एयर फिल्टर मास्क लगाउन चाहँदैन। धेरै व्यक्तिहरूले भर्खरै पत्ता लगाएझैं एयर फिल्टर मास्क लगाउनु असहज हुन सक्छ।
व्यक्ति र घरपालुवा जनावरले कदापि मास्क लगाउन मनपर्दैन। तर हामी यो सुरक्षा र सुरक्षाको लागि गर्छौं भनेर थाहा पाउँदा हाम्रो छोटो र दीर्घकालीन स्वास्थ्य हाम्रो तत्काल आराम भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ।
हाम्रो प्रयोग गर्नुहोस् भिडियो प्रशिक्षण गाईड सल्लाहहरू कुकुरलाई तपाईंको कुकुरमा परिचय गराउन र तिनीहरूलाई संकटमा हुँदा यसलाई लगाउनको लागि तयार गर्नुहोस्।
पशु चिकित्सकहरूले कुकुरहरूको लागि एयर फिल्टर मास्कको बारेमा के भन्छन्?
हामी टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय र मिसौरी साना पशु क्लिनिकल विज्ञान विभागहरु संग कुकुरहरु को वायु प्रदूषण को खतराहरु बाट सुरक्षित हुन को लागी आवश्यकताहरु को बारे मा कुराकानी मा छौं। त्यहाँ सम्झौता छ कि कुकुरहरु को लागी एक एयर फिल्टर मास्क केहि वातावरण मा लाभ छ। त्यहाँ एक कुकुर मा एक मास्क लगाउन को लागी चेतावनी को बारे मा पनि सम्झौता छ, विशेष गरी ओक्सीजन र overheating को बारे मा।
हामी पहिरन योग्य एयर फिल्टर मास्क प्रयोग गरेर कुकुरहरूका लागि कार्यात्मक क्षमताहरू र सहिष्णुताहरूको बारेमा थप अनुसन्धानको लागि अनुदान प्रस्तावको अनुसरण गर्दैछौं। प्रगति यस स्वतन्त्र अनुसन्धानमा भएकाले हामी हाम्रो वेबसाइट अपडेट गर्नेछौं।
K9 Mask® एयर फिल्टर आईएसओ १16890 XNUMX ० एक स्वतन्त्र प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित छन्?
हो, K9 मास्क एयर फिल्टर स्वतन्त्र रूपमा एक स्वतन्त्र प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित गरीएको छ निस्पंदन प्रभावकारिता को लागी परीक्षण गर्न।
तपाइँ निम्न लि using्क को उपयोग गरी यी एयर फिल्टर दक्षता परीक्षण को नतिजा समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
अझै सिक: आईएसओ १9 16890 ० परिणाम संग KXNUMX Mask® एयर निस्पंदन परीक्षण
अफ्टरपे भनेको के हो? यस्ले कसरी काम गर्छ?
"आफ्टरपे" ले तपाईंलाई K9 मास्की उत्पादनहरू खरीद गर्न अनुमति दिँदछ तर equal समान भुक्तानीमा खरीदको लागि भुक्तान गर्नुहोस्।
सधैं शून्य ब्याज, कहिले पनि थप शुल्कहरू जब तपाईं भुक्तानी गर्नुहुन्न
के तपाइँको प्रस्ताव रश शिपिंग विकल्पहरू छन्?
हो, अर्डर चेकआउट प्रक्रियाको बखत तपाईं धेरै शिपिंग क्यारियर र सेवा (USPS, UPS, FedEx, आदि) स्तरहरू मध्ये एक छनौट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ।
के हामी अन्तर्राष्ट्रिय शिपिंग प्रस्ताव गर्छौं?
हो, चेक आउट प्रक्रियाको बखत अन्तर्राष्ट्रिय अर्डरहरूलाई आदेशका लागि धेरै शिपिंग क्यारियर र सेवा स्तर विकल्पहरू दिइनेछ।
प्रत्येक दिन ढुवानीको लागि अर्डर कट अफ समय के हो?
हप्ताका दिन हामी stock:०० बजे सीएसटी भन्दा पहिले अर्डर गर्दछौं भने स्टक आईटममा धेरै अर्डरहरू जहाजमा पठाउन सक्षम हुन्छौं।
शनिवार हामी दिउँसो १२:०० सीएसटी भन्दा पहिले आदेश गरिएको छ भने समान सामानहरू स्टकमा अधिक आदेशहरू पठाउन सक्षम छौं।
-०-दिन K30 Mask® रिटर्न नीति
हाम्रो -०-दिन K30 मास्कको बारेमा विवरणहरू पढ्नुहोस् फिर्ता नीति.
-०-दिन K30 Mask® आकार विनिमय नीति
हाम्रो -०-दिन K30 मास्क आकारका बारे विवरणहरू पढ्नुहोस् विनिमय नीति.